ကြော်ငြာပါရစေ.. | မှော်ဝင်မြို့
ဘလော့ပိုစ့်များအား အပြည့်အစုံဆက်လက် ဖတ်ရှု့လိုလျှင်ရန် ဖတ်ရှု့လိုသော ဘလော့ပိုစ့် ၏ခေါင်းစဉ်အား နှိပ်၍ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည် Error အနည်းငယ်တက်နေသောကြောင့် သည်းခံပေးကြပါ ဗျာ လာရောက်အားပေးမှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ဗျာ
ဓါတ်ပုံ ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးရေးအတွက် ၀န်ဆောင်ပေးပါရစေ..ကျွန်တော့်ကတော့ ဓါတ်ပုံ နှင့် ဒီဇိုင်း နန်းညွန့်ဦး ပါ..။ Photo Outdoor ကို အဓိကထား ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ဓါတ်ပုံ နှင့် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခြင်း ၊ ကြော်ငြာဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းများ ၊ပုံဟောင်းပြင်ခြင်း ၊ဓါတ်ပုံဘောင်သွင်းခြင်း ၊ဓါတ်ပုံများကိုအသံများနှင့် တွဲဖက်ပြီး SlideshowDVD လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ဗီနိုင်းထုတ်ပေးခြင်း ၊Phamplet ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းတို့ကို
လက်ခံဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။မိတ်ဆွေများအပါအ၀င် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအပေါင်းအသင်းများမှ အလှူ ၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ ရဟန်းခံ ရှင်ပြု နားသ ၊ ဘွဲ့ယူ ၊ မွေးနေ့ ၊ အပျော် ခရီးထွက်ခြင်း ၊လေ့လာရေးခရီးထွက်ခြင်း ၊ဘုရားဖူးခရီးထွက်ခြင်းများ ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ၊ကျောင်းကပွဲများ ၊နှစ်ပတ်လည်ပွဲများ နှင့် အခြား သောဧည့်ခံပွဲများတွင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရေးဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ရှိခဲ့ပါကခင်မင်ရင်းနှီးစွာ မေးမြန်း ရက်ချိန်းယူ ဆောင်ရွက်နိုင် ပါသည် ခင်ဗျာ..။ဓါတ်ပုံများကိုမြန်မာပြည်၏နံပါတ်(၁) အကောင်းဆုံးဖြစ်သော ဓါတ်ပုံ ဆေးသားနှင့် ဓါတ်ပုံစက္ကူကိုသာ သုံးစွဲထားပါသည်။ မိတ်ဆွေများ ကုန်ကျသွားသော ငွေကြေးထက် ပိုမိုသော ၀န်ဆောင်မှုများကို ဓါတ်ပုံ နှင့် ဒီဇိုင်းနန်းညွန့်ဦး မှ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဖန်တီးမှုအား ကောင်းကောင်း နှင့် အလှအပဖြစ်ဖွယ်..ဓါတ်ပုံများလိုချင်ပါလျှင်..ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ၀န်ဆောင်ခနှုန်းထားများမှာ ……
(၁) ဘွဲ့ယူ (၂) ရက် - ၃၅၀၀၀ ကျပ် ဖြင့် ၀န်ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပေးနိုင်သော အမှတ်တရဓါတ်ပုံများမှာ ၄” x ၆” အရွယ်အစား ဓါတ်ပုံ (၅၀) နှင့်
၈” x ၁၂” အရွယ်အစား ဘွဲ့ပုံအကြီး တစ်ပုံ ပါဝင်ပါမည်။ အထူးပြင်ဆင်ထားသော
အမှတ်တရ ပုံများပါဝင်ပါမည်။ ပုံအရေအတွက် ပိုလာပါက ကျသင့်ငွေလည်း
ပိုလာနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ ကျောင်းဝင်းထဲမှဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခွန်ကို
ငှားရမ်းသူမှ ပေးဆောင်ရပါမည်။ တစ်ရက်လျှင် ကျပ် (၄၅၀၀)
ရိုက်ကူးခွန်ဆောင်ရပါသည်။ ကြိုသိစေရန်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၈” x ၁၂”
ဆိုဒ် အစား ၁၀” x ၁၄” ဆိုဒ် ကိုယူလိုပါကကျပ် ၅၀၀၀ ထပ်မံ ပေးချေရပါမည်။
(၂) အလှူ ၊ မင်္ဂလာဆောင် နှင့် မွေးနေ့ပွဲများအတွက် ၀န်ဆောင်ခမှာ .. ကျပ် -
၆၀၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်။ ပေးနိုင်သော အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ များမှာ.. ၄ x ၆ အရွယ်အစား
ဓါတ်ပုံ အရေအတွက် (၆၀) ပုံပါဝင်ပြီး အဆိုပါ ဓါတ်ပုံများကို Album ထဲသို့
ထည့်အပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဓါတ်ပုံများကို အမှတ်တရအနေဖြင့်
သီချင်းများဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထား သော Slideshow DVD တစ်ခွေ နှင့်
ဘောင်ပါတပ်ဆင်ပြီး ပုံကြီး (၁၀”x ၁၄”) Size တစ်ပုံ ပါဝင်ပါမည်။ ပုံအရေ
အတွက် ပိုလာပါက ကျသင့်ငွေ လည်း ပိုလာနိုင်ပါသည်။ ယခုနှစ်
အထူးလက်ဆောင်အနေဖြင့် စာမျက်နှာ(၈) မျက်နှာ ပါဝင်သော
ဓါတ်ပုံအသားသီးသန့်သုံး ဓါတ်ပုံစာအုပ်တစ်အုပ် ပါဝင်ပါသည်။
အားလုံးအတွက် DVD တစ်ချက်ထွက် ကျပ်(၁၀၀ ၀၀၀)၊ နှစ်ချပ်ထွက် ကျပ်(၁၅၀
၀၀၀)ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ချက်။ ။ တရားပွဲများဖြစ်ပါက အထူး
ညှိနှိုင်းလျော့ပေးပါမည်။ ရိုက်ကူးရေးသွားလာစရိတ်များကို တာဝန်ယူရပါမည်။
(၄) ဘုရားဖူးခရီး ၊ လေ့လာရေးခရီး ၊ အပျော်ခရီးများ ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ၊
ကျောင်းကပွဲများ ၊ နှစ်ပတ်လည်ပွဲများ ၊ ရဟန်းခံ ရှင်ပြုနားသပွဲများအတွက်အထူးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးပါမည်။နယ်အောက်ဒိုးလိုက်ပါစေလိုပါက ခရီးသွားလာ စရိတ် များကို တာဝန်ယူပေး
ရပါမည်။ လုပ်ငန်း ဆောင်တာ အားလုံးအတွက် ကြိုတင်ရက်ချိန်း ရယူနိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ ၊ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် Email Account များမှာ……
အမှတ် (၄၂၂/က) ဆုပြည့်ရတနာ (၂)လမ်း ၊ ၅၆ ရပ်ကွက် ၊ ဒဂုံတောင်မြို့နယ် ၊ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ။
ဖုန်း =>> 09-4200-17519
Website =>> www.mawcity.com
Email =>> nnophoto@gmail.com,photo.nannnyuntoo@gmail.com
သင့်ရဲ့ ထင်မြင်ချက် စကားလေးတစ်ခွန်းဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ရှေ့ဆက်ရေးသားရန် အားဆေးလေး တစ်ခွက်ပါပဲဗျာ
မှော်ဝင်မြို့ - အဖွဲ့ဝင်များ
ဓါတ်ပုံတွေကို hack ကြည့်လိုက်
Mozilla Firefox = EPIC FolderColorizer
All AutoCAD 2000T02012 Full Version + Crack Keygen
Free Dwonload Windows 8 All Versions
Android User များအတွက် လျှိုဝှက်ကုဒ်များ
Android Phone Apps 22
Android Phone Apps & Games
Apple TV2(4.1/8M89)
Apple TV2(4.2.1/8C154)
Apple TV2(4.3/8F191m)
Apple TV2(5.1/10A406e)
Apple TV3(5.1/10A406e)
iPad2(CDMA) (4.3/8F191)
iPad2(CDMA) (4.3.5/8L1)
iPad2(CDMA) (5.0/9A334)
iPad2(CDMA) (5.1.1/9B206)
iPad2(CDMA) (6.0/10A403)
iPad2(GSM) (4.3/8F191)
iPad2(GSM) (4.3.5/8L1)
iPad2(GSM) (5.0/9A334)
iPad2(GSM) (5.1.1/9B206)
iPad2(GSM) (6.0/10A403)
iPad2(Wi-Fi) (4.3/8F191)
iPad2(Wi-Fi) (4.3.5/8L1)
iPad2(Wi-Fi) (5.0/9A334)
iPad2(Wi-Fi) (5.1.1/9B206)
iPad2(Wi-Fi) (6.0/10A403)
iPad3(CDMA) (5.1.1/9B206)
iPad3(CDMA) (6.0/10A403)
iPad3(GSM) (5.1.1/9B206)
iPad3(GSM) (6.0/10A403)
iPad3(Wi-Fi) (5.1.1/9B206)
iPad3(Wi-Fi) (6.0/10A403)
iPhone 3G S (5.0/9A334)
iPhone 3G S (5.1.1/9B206)
iPhone 3G S (6.0/10A403)
iPhone4(CDMA) (4.2.10/8E600)
iPhone4(CDMA) (5.0/9A334)
iPhone4(CDMA) (5.1.1/9B206)
iPhone4(CDMA) (6.0/10A403)
iPhone4(GSM) (5.0/9A334)
iPhone4(GSM) (5.1.1/9B206)
iPhone4(GSM) (6.0/10A403)
iPhone4S (5.1.1/9B206)
iPhone4S (6.0/10A403)
iPhone5(6.0/10A405)
iPod touch 3G (4.3/8F190)
iPod touch 3G (4.3.5/8L1)
iPod touch 3G (5.0/9A334)
iPod touch 3G (5.1.1/9B206)
iPod touch 4G (4.3/8F190)
iPod touch 4G (4.3.5/8L1)
iPod touch 4G (5.0/9A334)
iPod touch 4G (5.1.1/9B206)
iPod touch 4G (6.0/10A403)
4G Photo/Color (11/1.2.1)
4G Photo/Color (5/1.2.1)
Classic 2G (33/2.0.1)
Classic 3G (160 GB) (35/2.0.4)
Mini 1G (3/1.4.1)
Mini 1G (6/1.4.1)
Mini 2G (7/1.4.1)
Nano 1G (14/1.3.1)
Nano 1G (17/1.3.1)
Nano 3G (26/1.1.3)
Nano 4G (31/1.0.4)
Nano 5G (34/1.0.2 34A20020)
Nano 6G (36/1.2 36B10147)
Shuffle 1G (128/1.1.5)
Shuffle 1G (129/1.1.5)
Shuffle 2G (130/1.0.4)
Shuffle 2G (131/1.0.4)
Shuffle 2G (133/1.0.4)
Shuffle 3G (132/1.1)
Shuffle 4G (134/1.0.1)
Shuffle 4G (135/1.0.1)
ညီမရေ အစ်ကို သတိရနေမယ်နော်
ချစ်သူနဲ့ ဝေးရတဲ့ ..ကံ
နတ်သမီးဖန်ဆင်းတဲ့ မှော်ဆရာလေးရဲ့ အလွမ်းဇာတ်လမ်း(၂၂)
နတ်သမီးဖန်ဆင်းတဲ့ မှော်ဆရာလေးရဲ့ အလွမ်းဇာတ်လမ်း(၂၀-၂၁)
နတ်သမီးဖန်ဆင်းတဲ့ မှော်ဆရာလေးရဲ့ အလွမ်းဇာတ်လမ်း(၁၈-၁၉)
နတ်သမီးဖန်ဆင်းတဲ့ မှော်ဆရာလေးရဲ့ အလွမ်းဇာတ်လမ်း(၁၇.၅)
နတ်သမီးဖန်ဆင်းတဲ့ မှော်ဆရာလေးရဲ့ အလွမ်းဇာတ်လမ်း(၁၇)
ယနေ့ ခေတ်စားနေကြသော အွန်လိုင်း
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် BOT စနစ်ဖြင့် ကလေးတို့၏ ထူးဆန်းသော အမူအကျင့် များ
သင့်၏ ဘ၀ခရီးလမ်းအတွက် ထူးဆန်းသောစကား(၂၆)ခွန်း
သူပြော... ငါပြော... OK
ကောသလမင်းကြီး၏အိပ်မက်(၁၆)ချက် ချစ်သူများနေ့ပေါ်ပေါက်လာပုံ မံမီများ
နုပျိုစေမည့် လျှို့ဝှက်ချက် သုံးရပ်
ဒံပေါက်အချို့တွင် စားသုံးရန် မသင့်သည့် ဆိုးဆေးများ
Digital Camera ၀ယ်ယူရာတွင်သတိပြုသင့်သည့်အချက်(၁၀)ချက်
လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းဝေးစေမည့် အချက်(၁၀)ချက်
စမတ်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာများ အသုံးများသော မိဘများဆိုးကြိုး
ဖုန်းလိုင်းတွေ ဘယ်လို ဖြစ်ပါလိမ့်
Android ဖုန်း က task killer အကြောင်း
မွတ်ဆလင် hacker များမှ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ facebook
﻿ တာဝန်မဲ့ရေးသားသော အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုသူအရေအတွက်
ဓမ္မာ - သောက - အင်းဝ - ရာဇာ အိမ်ထောင်ဘက်များအတွက်
မင်္ဂလာကိစ္စ အထမြောက်အောင်မြင်စေသော ယတြာ
ဆုံးရှုံးနေသော ပစ္စည်းဥစ္စာများ ပြန်ဝင်စေသောယတြာ
Weekly Eleven မှာတင်ပြထားသော လစာကိစ္စများ
ပြည်တွင်း အင်တာနက်သုံးစွဲမှုတွင် မြန်မာပြည်မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေတယ်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူဦးရေ ၇၅% အတွက် ကျပ် ၂၁ ဘီလီယံ
အမြန်ဆုံးသတင်းပို့ပါ ဥပဒေကြောင်းအရ အခမဲ့ အကူအညီပေးမည်
ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဇော် မြန်မာနိုင်ငံသို့
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် နိုင်ငံရေး
ရန်ကုန် -နေပြည်တော်- မန္တလေး ကျည်ဆန်ရထားလမ်း
ဆန္ဒကို သိက္ခာဖြင့် မထိန်းသော အမျိုးသားများ၏
၅၀၀၀ ကျပ်တန်ဆင်းကဒ် ကိစ္စသည်
ကျပ် (၅၀၀၀)တန် ဖုန်းများအား နိုင်ငံတော်မှ ပါမစ်ချပေးခြင်းမပြုနိုင်သေး
အခြေခံလူတန်းစားများအတွက် တစ်လ ၅၀၀၀၀ သွင်းပြီး တိုက
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ထိပ်သီးညီလာခံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည
ဘုရင့်နောင်ဈေး အဆောင်သစ် တည်ဆောက်ရေး မဲခွဲဆုံးဖြတ
လယ်ယာမြေ ဥပဒေမူကြမ်းများကို လွှတ်တော်အထိ ကန့်ကွက်ရန
လယ်ယာမြေသိမ်းယူနိုင်သည့် ဥပဒေပုဒ်မအား ဖျက်သိမ်းရန်
ဦးခင်ညွှန့်ဘာကြောင့် လစာ ဒေါ်လာ ၅ထောင်ရသလဲ?
ဇာဂနာပြောတဲ့ ဇာဂနာ ဘာကြောင့် ဦးခင်ညွှန့်နဲ့ တွေ့ရလ
KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး
Global Vision ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးလိုက်တာ သမ္မတ အိုဘားမား
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးသည်မှာ တောင်းဆိုမှုေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဦးခင်ညွန့်
ယနေ့ (၁၄.၁.၂၀၁၂) လွတ်မြောက်သော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား
မြန်မာ – ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူပေါင်း၍ လှည်းတန်း ဗံ...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး ကြံ့ခိုင်ရေးနှင
အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲက အွန်လိုင်းတွင် ထီတိုက်နို
(၂၇၇) ကြိမ်မြောက်မှ စ၍ အောင်ဘာလေထီ သိန်း (၁၅၀၀) ဆု.
ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်၊ ရေး၊ ထားဝယ်ရထားထွက်ချိန် ညပို
မြန်မာငွေကျပ် (၅၀၀၀)ဖြင့် GSM ဖုန်းအသုံးပြုနိုင်မည
ထီဈေးတွေ မကျပါ…သွားကံစမ်းပါ ..ကျပ် ၃၀၀
﻿ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသေ
ရွှေည၀ါဆရာတော်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာန
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်အပြည်ပြည်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတော
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်များ ပေးပြီးနောက် ရန်ကုန်တွင
ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင် အရောက် လှမ်းရတော့မယ် ဒေါ်အောင်ဆ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၀န်ကြီးကလင်တန် ပူးတွဲသတင်းစာ
GSM တာဝါတိုင်စိုက်ရန် မြေတူးရာမှ ရှေးဟောင်းရုပ်ပွားတော်များ
ရန်ကုန်တိုင်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ၀ါယာလတ်တွင် အိမ်တ
ပြည်ပအေဂျင်စီများ မရိုးသားလျှင် Online မှတစ်ဆင့် တိုင်ကြားခွင့်ပြု
တန်ဖိုးနည်းဖုန်းများကို ကျပ်သုံးသိန်းထက် မများဘဲ
MM Tarot Lenormand နက္ခတ်ဗေဒင်မှတ်စုများ မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်
Burma Strnge News
Myanmar Music Mp3 Mtv
Softwaer & Music
MM Wordpass .Com
Myanmar IT Pro ဘုရင့်နောင်
Blog Tutorial,Free blogger
Search Engine များ
Kaspersky Daily Kaspersky Weekly Kaspersky Monthly
BitDefender McAfee Virus